Burkina Faso validates report of the African Union on cultural services |
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Burkina Faso waxay ansaxineysaa warbixinta Midowga Afrika ee ku saabsan adeegyada dhaqanka
Burkina Faso waxay ansaxineysaa warbixinta Midowga Afrika ee ku saabsan adeegyada dhaqanka
Waxaa laga yaabaa 18, 2014
ADDIS ABABA, Ethiopia – Warbixinta Kiiskii Midowga Afrika ee ku saabsanaa Adeegyada Dhaqanka ee Burkina Faso ayaa lagu ansixiyey May 15 ee Ouagadougou.
ADDIS ABABA, Ethiopia – Warbixinta Kiiskii Midowga Afrika ee ku saabsanaa Adeegyada Dhaqanka ee Burkina Faso ayaa lagu ansixiyey May 15 ee Ouagadougou. Aqoon-is-weydaarsiga ansixinta ayaa waxaa si wadajir ah u qabtay Guddiga iyo Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Burkina Faso. Waxaa ka soo qayb galay daneeyayaasha fanka, qoob ka ciyaarka, riwaayadaha, iyo shineemooyinka, iyo kuwo kale oo ka tirsan qaybaha bulshada iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale bah-wadaagta horumarka. Daraasaddan oo ay u xilsaartay waaxda ganacsiga iyo warshadaha ee guddiga Midowga Afrika, ayaa qayb ka ah mashruuc lagu samaynayo tiro koob ku saabsan qaybaha adeegga ee Afrika, iyo kor u qaadista aqoonta iyo fahamka ganacsiga adeegyada si loo helo aasaaska horumarinta waaxda adeegga iyo xoraynta mustaqbalka.
Burkina Faso waa xarunta fanka iyo muusiga ee Afrika waxayna abaabushaa dhowr munaasabado dhaqameed oo waaweyn kuwaas oo ay u samaysay aqoonsi balaadhan Afrika oo dhan iyo meelo kaleba. Kuwaas waxaa ka mid ah: Bandhiga Caalamiga ah ee Dhaqanka Hip Hop, Festival of Jazz, Festival des Massques et des Arts, Festival panafricain de Cinema de Ouagadougou (FESPACO) iyo Todobaadka Dhaqanka Qaranka. Waxa kale oo uu wadanku horumariyay dugsiyo lagu barto masraxa, fanka iyo qoob ka ciyaarka oo soo jiita ardayda Afrika oo dhan. Sheekada guusha ee Burkina Faso waxay caddayn u tahay in qaybta dhaqanka aan la xakameynin, maadaama ay soo celinayso dib u soo celinta dhaqaalaha iyo shaqaaleysiinta dhalinyarada. Sheekadu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in siyaasadaha dawladdu ay fure u yihiin guusha qaybta.
Ujeeddada aqoon-is-weydaarsiga ansixinta ayaa sidoo kale ahayd in la isu keeno qaybaha kala duwan ee bahda dhaqanka si ay dib u eegis ugu sameeyaan waxyaabihii ka soo baxay warbixinta qabyada ah, gacanna ka geystaan ​​dhamaystirka warbixinta. Ka qaybgalayaashu waxay heleen xog, xog iyo cadaymo ansax ah waxayna gaadheen is-afgarad ku saabsan natiijada warbixinta.
Furitaankii shirka, Mudane Aly Iboura Moussa, oo ah wakiilka Midowga Afrika, ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay dowladda Burkina Faso iskaashiga wanaagsan iyo taageerada aan loo meel dayin ee ku aaddan samaynta daraasadda ku saabsan adeegyada dhaqanka ee Burkina Faso iyo abaabulka aqoon-is-weydaarsiga ansixinta . Sidoo kale waxa uu bogaadiyay shaqada safaarada Burkina Faso ee Addis Ababa oo fure u ah guusha daraasada. "Warshadaha Dhaqanka ee Burkina Faso waxaa loo aqoonsaday mid ka mid ah daraasadaha kiisaska sababta oo ah guusha Warshadaha ee noqoshada hormuudka dhoofinta adeegyada dhaqanka ee qaaradda," ayuu yidhi. Mr. Iboura Moussa ayaa xusay in kartida dhoofinta adeegyada aan caadiga ahayn sida dhaqanka ay sahamiyeen wadamada qaar munaasabadaha sida Carnivals, FESPACO, iyo Todobaadka Dhaqanka ee Qaranka Burkina Faso, iyo kuwo kale. "Warshadaha dhaqameed ama hal-abuurka ayaa si isa soo taraya u noqday wax-soo-saarka weyn ee dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya si isku mid ah tusaale ahaan waxay ka qaybqaataan ugu yaraan 3.2 boqolkiiba GDP US iyo 1.4% Nigeria GDP waana shaqo-bixiyaha labaad ee Nigeria. Burkina Faso qaybta dhaqameedku waxay ku biirtaa CFA79, 667,000,000 taas oo ah 2.02% GDP. Tirooyinkan ayaa tilmaamaya in qaybtan aan la iska indho tiri karin, ayuu ku nuuxnuuxsaday.
Boeing, Air Canada waxay u dabaaldegaysaa keenista 787 Dreamliner ee ugu horreeyay ee Kanada
Xeebta cusub ee adduunka ugu xaragada badan ayaa “kor loo taagay”
Seychelles waxay dib ula xiriirtay Shuraakada Ganacsiga ee WTM Africa